iPhone6& iPhone6Plus တွေက ML ကို ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ဆော့ကစား နိုင်သလား -
iPhone6& iPhone6Plus တွေက ML ကို ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ဆော့ကစား နိုင်သလား
ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်နိူင်မလဲ ?
ဘာလုပ်နိုင်တာတွေ ရှိသလဲ ?
ကျွန်တော် နဲ့အတူ ကြိုးစား ကြည့်လိုက် ရအောင်လား…
Day 1 – မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်စီက iPhone6gold လေး ရလာခဲ့တယ် Group က members တွေပြောသံကြားတယ်iPhone6မှာ Mobile legend ဆော့ ရတာ ပြန်ပြန် ထွက်နေတယ် ကောင်းကောင်းဆော့လို့ မရဖူး ကျွန်တော်လည်းစမ်းကြည့်မယ်
ရရခြင်းပဲ Mobile legend ကို App Store ကနေဒေါင်းထည့်လိုက်ပြီ စဖွင့်ဆော့တယ့် Tutorial တွေအားလုံးပြီးတယ့်ထိ အဆင်ပြေတယ် မ lag ဖူး မထွက်သေးဖူး အချိန်မရွေး ထွက်သွားနိုင်တာ သိနေတယ် lag ပြိးပဲ ထွက်မလား ပူပြီးပဲ ထွက်မလားတော့ မသိဖူး ဒီနေ့ အဖို့ တော့ အဆင်ပြေ သွားပြီ
Day2– မနေ့က Tutorial တွေတော့ အကုန်ပြီးသွားအောင် ဆော့ပြီးပြီး ဒီနေ့ တကယ့် real တွေ စဆော့မယ် စက်ကိုပေါ့နေအောင် မဆော့ခင် အရင်ဆုံး Ram ရှင်းလိုက်တယ် ပြီးတော့Restart/reboot ချလိုက်တယ် (သူတောင်းစားကPower ပြန်တတ်မလာလို့ home key နဲ့ တွဲနှိပ် ဖွင့်လိုက် ရသေးတယ်)
Play match စပြီ ပထမပွဲ Zilong ကိုင်လိုက်တယ်တစ်ပွဲလုံးဆော့ရတာ အဆင်ပြေတယ် 22kill no dead နဲ့ God among men ရတယ် ဒုတိယ ပွဲစပြီLayla ကောက်တယ် 13 ခါ dead တယ် ပွဲတစ်ခုလုံးဖုန်း ၂ခါ ပြောလိုက်ရတယ်ပွဲပြီးတော့ မအားတာနဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ရတယ် နောက်နေ့မှ ပြန်စမ်းမယ်
Day5– ကြားထဲက ၂ ရက်က ဟိုရားရား ဒီယားယားနဲ့ မဆော့ စမ်းဖြစ်လိုက်ဖူး ဒီနေ့ ပြန်စမ်းကြည့်မယ် အခုပွဲစပြီMage နဲ့ ပွဲထွက်လိုက်မယ် ဆော့တာမှ ၇ မိနစ်ပဲ ကြာသေးတယ် ပြန်ထွက်သွား ပြီအဲ့ဒီမှာ ဇာတ်လမ်းက စပြီ
ဒါနဲ့ ထွက်သွား လက်စနဲ့ Ram ရှင်း restart ပြန်ချရတယ် ဒီတစိခါတော့ ကျေးဇူးရှင် က Power ကောင်းကောင်း ပြန်တတ် လာတယ် ပြီးတော့ ပြန်ဝင် ပြန်ဆော့ Defeat နေပြီးပြီ
နောက်တစ်ပွဲ စဆော့လိုက်တယ် ဒီတစ်ပွဲတော့အဆင်ပြေတယ် နောက်တစ်ပွဲ ပြန်ဆော့တယ် စခါရှိသေး ပြန်ထွက်သေး တယ် ခြေနေမကောင်းဖူး
Day6– မနေ့က အဆင်မပြေ သမျှ ကောင်းလေအောင် ဒီနေ့တော့ ပထမဆုံး Storage ကို တစ်ဝက်လောက် လွတ်အောင် အရင်ရှင်းတယ် Reset all settings ချ Background app refresh ကိုပိတ် ပြီးတော့ ပြန်ဆော့တယ် မထူးပါဖူး၂ ပွဲပါပဲ နောက်တော့ ပြန်ထွက်လေတယ်
Day 8 – day7မှာ Erase all လုပ်ပြစ်လိုက်တယ်Day 8 တွက်ပြင်ဆင် ထားတယ် down သင့်တာပြန်ဒေါင်းပြီးအားလုံး အဆင်သင့် ဖြစ်အောင် လုပ်ထားလိုက်တယ်
ဒီနေ့ ပြန်စပြီး ဆော့ Day 1 ကတိုင်းပဲ Tutorial တွေပြီးသည်ထိ အဆင်ပြေ နေတုန်း Real match စလိုက်တာ ၁ ပွဲပဲရှိသေးတယ် ပလပ် ကျွတ်သွားရှာပြီ ပြန်ထွက်သွားလေတယ်
Day unknown – အရင် အကြိမ်တွေ စိတ်ညစ်သမျှ မစမ်းဖြစ်တော့ ဖူး ဒီတစ်ခါတော့ Latest OS ရနိုင်တယ့် စီ တင်ပြီးမှ ပြန်စမ်းကြည့် မယ် ဒါနဲ့ပဲနောက်ဆုံး OS ကို တင်လိုက်တယ် ဘုရား မလို့iTunes တော့ တန်းမသွားရှာဖူးချောချော မူမူပဲရောက်သွားတယ်
ပြန်ဆော့ စမ်းပြည့်မယ် ဆိုပြီး Mobile legend ဖွင့်လိုက်ပြီး March တစ်ခုကို စတော့ လိုက်ပြီ“Welcome to Mobile legend” ဒီတစ်ကြီမ် ရသွားလေ မလား ရင်တွေ အရမ်းခုန် နေပြီ နောက် ဘာဆက်ဖြစ် သလဲ ဆိုတော့ ကား…
iPhone6&6Plus မှာ Mobile legend ဆော့ရသလား ဆိုရင် – Yes (of course) ပါ
“ကောင်းကောင်း မွန်မွန် ချောချော မူမူ ရသလား” ဆိုရက်တော့ – No(sadly no) ပါ
No means No ပါ
ပြီးတော့ မြင်တယ့် အတိုင်း All of the above methods – not working ပါ
iPhone6series က still decent ဖြစ်တုန်းပါ ဆိုပေမယ့် သူ့ဘဝပေး Ram ခြေနေက
“မဖြစ်နိုင်ဖူး – မဖြစ်နိုင်ဖူး”
ဒီ Article လေးကို သဘောကျ နှစ်သက်ရင် like & share, ments တွေနဲ့ အားပေး သွားလို့ ရပါတယ်နော်
Previous iOS User များအတွက် ကောင်းနိုး ရာရာ Apps တစ်ဆင်စာ
Next သင် ဘာကြောင့် iPhone ကို မဝယ်သင့် သလဲ ?